Ilaalada wabiga waa nooc ka mid ah tareennada laga dhisay wabiga, kaas oo door muhiim ah ka ciyaara ilaalinta badbaadada shakhsiga iyo gaadiidka. Waxqabadkeeda ka hortagga isku dhaca waa mid aad u wanaagsan, gaar ahaan baabuurta iyo dadka. Waxa ugu muhiimsan waa in la wanaajiyo waxqabadka ka hortagga isku dhaca, gaar ahaan saamaynta uu ku leeyahay baabuurka, lagana ilaaliyo in baabuurka uu ku dhex socdo biyaha, taas oo keeni karta khatar nololeed, awoodda ka hortagga isku dhaca ee ilaalinta webiga ayaa aad muhiim u ah.
Magaca Alaabta Biriijka Ilaalada
Qalab Dhuumaha Isku-dhafka Birta Aan Lahayn
Midabka La beddeli karo
Dusha sare Dahaarka budada
1.Isticmaalka ka hortagga daxalka iyo tignoolajiyada ka hortagga miridhku si loo kordhiyo nolosha alaabta.
2. Dusha sare waxay ka samaysan tahay bir aan lahayn oo waxay leedahay sifooyin is-nadiifineed oo wanaagsan.
3.Xilliga buundada waa sahlan tahay in la rakibo, ma fududa in la dhaawaco, waxay leedahay meelo yar oo xiriir ah oo xasilloon oo wanaagsan.
4.Xirmooyinka buundada waxay ilaaliyaan badbaadada dadka lugaynaya, qurux badan oo kharash-ool ah.
Dhibaatooyinka u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho inta lagu guda jiro Dhismaha ilaaliyaha buundada
1. Inta lagu jiro dhismaha waardiyaha, xogta xarumaha kala duwan waa in si sax ah loo maareeyaa, gaar ahaan booska saxda ah ee dhuumaha kala duwan ee ku aasan hoose. Lama ogola in ay waxyeelo u geysato tas-hiilaadka dhulka hoostiisa ah inta lagu jiro habka dhismaha. Haddii ay dhacdo in ay ku filnaan waydo buuxinta qoto dheer ee dhuumaha isgaadhsiinta ee dhulka hoostiisa, tuubada qulqulka ama qulqulka sare, booska tiirka waa in la hagaajiyaa ama habka lagu hagaajiyo tiirka waa in la beddelaa.
2. Marka tiirka aad loo sii wado, tiirka looma soo bixin si loo saxo. Inta soo hartay waa in la soo saaraa, aasaaskeedana waa in mar kale la dhufto ka hor inta aan la wadin, ama booska tiirka waa in la hagaajiyaa.
3. Ilaalada buundada waa in lagu rakibaa saxan flange, waana in fiiro gaar ah loo yeeshaa meelaynta saxanka flange iyo xakamaynta tiirka sare ee sare.
Hore: Dambiil silig bir ah oo aan caafimaad lahayn/dambiil jeermis dile
Xiga: Barxadda villa gidaarka badbaadada xayndaabka birta
Beerta cawska ah ee aan birta lahayn ee bamboo ilaaliyaha
Bamboo birta ah sida qaybta ilaaliyaha 1. Ku dayashada xayndaabka bamboo: ilaaliyaha isku xirka bamboo wuxuu u qaybsan yahay saddex badeeco iyadoo loo eegayo qeexida xubnaha. Dhexroorrada tubooyinka bambooyi-ka-yeelka waa 17 mm, 19 mm iyo 25 mm siday u kala horreeyaan. 2. Ku dayashada ubaxa bamboo iyo xayndaabka cawska: badeecada beddelka ah ee ubaxa bambooga iyo xayndaabka cawska waa xayndaabka cawska ee PVC. Bamboo guardrail waa alaabo chromium alloy ah, kaas oo lagu garto awood sare,...
Soo bandhigida barxadda dayr Villa birta ah 1. Xayndaabka waxa loo isticmaalaya habka daahan joogto ah, ma miridhku, aan flake off, ma midab libdhaysa, dhalaalaya ugu dambeeya oo deggan midabka. 2. Ma jiro naqshad ururinta alxanka oo ka dhigaysa rakibaadda mid fudud oo degdeg ah. 3. Afar lakab oo daawaynta ka hortagga daxalka ah iyo in ka badan labaatan sano nolosha adeegga ayaa aasaas ahaan u badbaadisa kharashka. 4. Ilaalinta deegaanka waxay xallisaa dhibaatada alaabooyinka caadiga ah ay wasakhowga u leeyihiin dhismayaasha. 5. Cunsuri adag oo dabacsan